Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Miatrika krizy ara-toekarena maika ny dia sy fizahan-tany any India
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana India • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny vokatry ny areti-mandringana dia mitohy manimba ny fiainana sy ny fiveloman'ny dia any India sy ny fizahan-tany ary koa ny fandraisam-bahiny mandritra ny taona manaraka. Raha misokatra miadana tsimoramora indray ireo sehatra sasany, dia mitohy mivelona ny tolona.
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any India dia nanome vola mitentina US $ 194 miliara ho an'ny toekarena indiana tamin'ny taona 2019 ary namorona asa manodidina ny 40 tapitrisa, izany hoe, 8 isan-jaton'ny asany manontolo.
Niato izany rehetra izany noho ny areti-mandringana ary izany dia namorona vokarin'ny ripple tamin'ny alàlan'ny indostria.
Ny valiny dia ny hotely sy orinasa marobe nikatona ka nahatonga ny fatiantoka asa ho an'ny ankamaroan'ireo izay niankina tamin'ity indostria ity ho amin'ny fivelomany.
Naminany ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana fa ny onja fahatelo an'ny COVID-19 dia tsy azo ihodivirana. Mila mihetsika izao ny governemanta ary manome fepetra fanampiana haingana hamahana ny krizy maha-maika maika atrehan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any India.
Ny Federasiona Chambers of Commerce & Indostria (FICCI) dia niantso indray ny governemanta ny amin'ny hamonoana ny renivohitra miasa rehetra, ny talen-tsekoly, ny zanabola, ny indram-bola ary ny overdrafts izay nifarana tamin'ny volana aogositra 2020 ka hitohy 1 taona, izany hoe Aogositra 2021.
Ny rafitry ny famahana ny RBI, izay namboarina nandritra ny onja voalohany an'ny ny valanaretina, mila jerena. Miaraka amin'ny fiantraikan'ny onja faharoa dia mitaky farafahakeliny 4-5 taona ny indostrian'ny hotely mba hahitana fiverenana amin'ny endrika mahazatra amin'ny asany. Amin'ity toe-javatra ity dia mila jerena ny vanim-potoana fanarenana sy ny tahan'ny. Zava-dehibe ny fanitarana ny vanim-potoana fanarenana an'ity sehatra ity hatramin'ny martsa 2024 - 2025.
Ny FICCI dia nangataka tamin'ny governemanta ihany koa mba hampiakatra ny fotoana fandoavana ny volan'ny Emergency Credit Garuaree Scheme (ECLGS) ho 8 taona (moratorium 4 taona miampy famerenam-bola 4 taona). Ireo mpandraharaha mpizahatany izay anisan'ny tena voa mafy amin'ity sehatra ity dia tena mila an-tsoroka ny tahirin-tsarimihetsika manondrana avy any India Scheme (SEIS) ho an'ny taom-piasana 2018-2019 izay mbola tokony aloa aminy. Izany dia hanampy azy ireo hijanona ambony mandritra ny krizy.
Ny fanemorana ny GST sy ny fandoavan-ketra mialoha eo amin'ny sehatry ny governemanta foibe ary ny fanesorana ny sarany ho an'ireo fahazoan-dàlana ho avy, fahazoan-dàlana / fanavaozana ary famoahana vola fanampiana mba hanomezana vola sy hanohanana ny karaman'ny mpiasa dia hanome fanampiana ihany koa. Mila manambara ny fepetra fanampiana izao ny governemanta mba hananan'ny indostria fanantenana ny ho tafavoaka velona amin'ny krizy.
Ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany any India dia mila fanohanana mitohy avy amin'ny governemanta ihany koa mba hamelomana sy hijanona ho matanjaka amin'ny ho avy. FICCI dia nanolotra izany Fizahan-tany any India dia tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny lisitry ny lalàm-panorenana miaraka, mba hahafahan'ny Center sy ny fanjakana mametraka ny politikan'ny fizahantany amin'ny fitomboan'ny fizahan-tany. Mba hamelomana indray ny fizahan-tany eto an-toerana, ny governemanta dia tokony hanome vola hetra hatramin'ny 1.5 faratra handaniana amin'ny fialantsasatra an-trano amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana momba ny Travel Travel (LTA).
Ny fanovana politika lehibe toy ny fanomezana ny satan'ny fotodrafitrasa ho an'ny trano fandraisam-bahiny rehetra, ny fanomezana ny satan'ny fanondranana ho an'ny fifanakalozana vola vahiny ho an'ny fitsidihana sy hotely fidirana ary ny fametrahana ny «Amusement Manufacturing Hub» eo ambany fifehezan'i Atmanirbhar Bharat Abhiyan manerana ny fanjakana rehetra dia hanohana ny fampandrosoana manontolo ny sehatra.
Indostrian'ny Travel sy fizahan-tany any India no miteny
Lehiben'ny fitsangantsanganana sy fizahantany any India, Amit Prasad, tale jeneralin'ny Le Passage mankany India, no manahy fatratra amin'ny toe-java-misy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahantany. Nilaza izy fa tsy dia misy loatra ny zavatra ataon'ny Governemanta India mba hamelomana indray ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany ao amin'ny firenena. Nanampy izy fa ny indostria eto amin'ny firenena dia eo an-tokon'ny fianjerana, ary ireo izay mbola tafavoaka velona tamin'ny sehatry ny indostria dia tsy maintsy namela ny mpiasa handeha hanapaka ny karaman'izy ireo mba hipetraka foana.
Any India, nanomboka ny 3 Janoary 2020, ka hatramin'ny 23 jona 2021, dia 30,028,709 ny tranga voamarina fa COVID-19 nisy fahafatesan'olona 390,660, hoy ny tatitra nataon'ny World Health Organization (WHO). Tamin'ny 15 Jona 2021 dia totalin'ny vaksinina 261,740,273 no natolotra.
eTurboNews mijoro ao ambadiky ny Freedom of Press sy PEN ...